~ Witch83၏ စိတ်ကူးကမ္ဘာ ~: 2010
Posted by witch83 at 10:53 AM2comments:
မနိုင်းနိုင်းစနေရဲ့ ကျွန်မနဲ့ အနီရောင်စာအုပ်လေး ကိုဖတ်ပြီး ရေးချင်တာတွေကို Facebook မှာ ချရေးထားတဲ့ post ကို ပြန် share တာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားဆိုရင် ရွှေလီနယ်စပ်နဲ့ စလုံးကလွဲရင် ဘယ်နေရာမှ မရောက်ဖူးပါဘူး။ စလုံးလေဆိပ်မှာလည်း စဝင်တုန်းက IPA letter ပြပြီး ရန်ကုန်ပြန်တော့လည်း Student Passပြပြီး အဝင်အထွက်လုပ်ခဲ့တာပါ။ ဘာပြဿနာမှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျောင်းသားဖြစ်နေသေးလို့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံပေးနေသေးတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာဆိုရင် အနှိမ်ခံရတာတော့ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် တူလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ကျောင်းမှာဆိုလည်း နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ပရောဂျက်လုပ်ရင် တစ်ချို့သော ဘဝင်မြောက်တဲ့သူတွေရဲ့ အနိုင်ကျင့်တာကို ခံရတတ်ပါတယ်။ (တကယ်တော့ သူတို့လည်း သေချာသိလားဆိုတော့ မသိ။ ) အပြင်မှာလည်း လူတွေက "Where are you from"လို့မေးလိုက်လို့ "Myanmar"လို့ဖြေပြီးရင် (များသောအားဖြင့်) မျက်နှာထား ပြောင်းသွားတာပါပဲ။ ဆက်ပြီးပြောရင် "နင်... ဘယ်လိုလုပ် အင်္ဂလိပ်စကား ပြောတတ်တာလဲ..." မေးတော့တာပါပဲ။ တစ်ခါကဆိုရင် ငါ...မြန်မာတွေကို မကြိုက်ဘူးလို့ ပေါ်တင်ပြောတဲ့ စလုံးတစ်ယောက်နဲ့ ကြုံဖူးပါတယ်။ ညံ့တယ်ဆိုပဲ။ အဲဒါနဲ့ နင်... မြန်မာဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ဖူးလဲ.... ညံ့တယ်လို့ ပြောရလောက်တဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေရှိခဲ့လို့လား ... ဘယ်လိုမျိုးတွေ တွေ့ခဲ့ရလို့လဲဆိုတော့ အီး... အား... နဲ့။ IT ကျောင်းသူဆိုလို့ စကားပြောကြည့်တော့လည်း ဘာမှသေသေချာချာ ရေရေရာရာမသိ၊ တတ်ယောက်ကား လျှောက်ရွှီး။ ( ကိုယ်ဘာမှမသိတဲ့သူတောင် သူ့လိုမဟုတ်ဘူး.... :P )
အချိန်ပိုင်းအလုပ်မှာဆိုရင်လည်း များသောအားဖြင့် ပညာနည်းပြီး ဗဟုသုတနည်းသူတွေများတော့ ပိုဆိုးပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဘာမှမဟုတ်ဘဲ မြန်မာဆိုတာနဲ့ နှိမ်ချင်တော့တာပါပဲ။ "You hear, Myanmar Girl" ဆိုပြီး ပြောတာတွေ ခဏခဏ ကြုံဖူးပါတယ် , "Girl" "Girl" ဆိုပြီး မဆိုင်တာတွေ လျှောက်ခိုင်းတော့တာပါပဲ။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ မြန်မာတစ်ချို့ မြန်မာလို့ အထင်ခံရမှာ ကြောက်လာကြတာပါပဲ။ စလုံးဟန်ဆောင်လာတာကြပါပဲ။ တစ်ချို့ဆို မြန်မာလို့ အထင်ခံရမှာဆိုးလို့ မြန်မာအချင်းချင်း အလုပ်မှာ စကား မပြောပါဘူး။ မြန်မာတွေနဲ့ မပေါင်းပါဘူး။ ဒီလိူဆိုရင် မြန်မာဟာ မြန်မာမဟုတ်ရင် ဘာဘာလဲ? ကျမကတော့ အဲဒါမျိုးတွေ လက်မခံပါဘူး။ မဆိုင်ပဲ အနိုင်ကျင့်ပြီး ခိုင်းရင် မလုပ်ပေးပါဘူး။ "ဒါ ငါ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး" လို့ ခပ်တည်တည်ပဲ ပြန်ပြောလိုက်တာ များပါတယ်.... ကံကောင်းတာက ကိုယ်နဲ့တွဲရတဲ့ Full-timer တွေ ကောင်းနေလို့။ ငါ့လူကို လာမခိုင်းနဲ့... ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ဆိုပြီး စွာပေးကြတယ်။ :) (လူတွေကတော့ brand full-timerရော၊ part-timerပါ တော်တော်စွာကြတာပဲလို့ ပြောကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ) ဒါပေမဲ့...မြန်မာတော်တော်များက အဲ့လိုခိုင်းရင် လုပ်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။ ဒါမျိုးလုပ်ရင် လက်မခံပါနဲ့။ အနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုတာ သူတို့ လုပ်လို့ရလို့ လုပ်တာပါ။ မရရင် သူတို့ မလုပ်ရဲပါဘူး။
တစ်ခါကဆိုရင် စလုံး customer တစ်ယောက်နဲ့ စကားများဖူးပါတယ်။ စစချင်း ဖဦးထုပ်လားလို့မေးပါတယ်။ မျက်နှာကြည့်တာနဲ့ ဒီ နှာဘူး .... date လုပ်ဖို့ပြောတော့မယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ မဟုတ်ဘူး... ငါ မြန်မာ လို့ပြောတော့ ...သြော်...မြန်မာလား... ဖဦးထုပ်ထင်လို့ ... အပျိုလားတဲ့။ ... အေး ...ဟုတ်တယ်ဆိုပြီး ခပ်တည်တည်နဲံ သူ့မျက်နှာစိုက်ကြည့်ပြောလိုကတော့ မြန်မာတွေက So Funny နော်တဲ့.... Why do you say so? လို့ပြန်မေးတော့ their English ဆိုးဖာနီတဲ့... ကောင်းလိုက်တဲ့ ပုဇွန်တောင်ဈေးခြင်း။ အေးပေါ့... သူတို့ပြောတာ ရီရမှာပေါ့ .. သူတို့က Singlish နဲ့မှ မပြောတာ...လို့ ပြန်ပြောလိုက်တော့ သူတော်တော် ဒေါသထွက်သွားတယ်။ ( ဒါတောင် ကိုယ်က တစ်ခွန်းလေးပဲ ပြန်ပြောရသေးတာ) သူက မပြီးဘူး...
နင် WP နဲ့ အလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်လားတဲ့.... မဟုတ်ဘူး.... ငါ NTU မှာ ကျောင်းတက်နေတာ student လို့ ပြောပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ လှည့်ထွက်ခဲ့ပစ်လိုက်တယ်။ CCTV camera ထဲမှာ ပါသွားမယ်။ သူ တိုင်ရင် သက်တောင့်သက်တာနဲ့ pay မဆိုးတဲ့ အလုပ်ကလေး ပြုတ်မယ်မှန်း သိရက်နဲ့ လုပ်လိုက်မိတာပါ။ တဆက်တည်းမှာပဲ Agent Fees တွေ အများကြီးပေးထားပြီး မဖြစ်စလောက်လခလေးနဲ့ WP ကိုင်ပြီး Full-time လုပ်နေတဲ့ မြန်မာမလေးတွေကို သနားမိပါတယ်။ မြန်မာတွေက ဖဦးထုပ်နဲ့ဆင်ပြီး ဖဦးထုပ်တွေကလည်း အဲ့ကိစ္စက လွယ်လွန်းတော့ တော်တော်ခက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆိုမြန်မာပါလို့ပြောနေတဲ့ကြားက အတင်းဇွတ်လုပ်နေလို့ Supervisor ဝင်ပါရတဲ့အထိ ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ ဒါတောင် သကောင့်သားက ဆိုင်ရှေ့မှာ ရပ်စောင့်နေလို့ သူ့ဘဲလာကြိုခိုင်းရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့.... ပြောမဲ့သာပြောနေတာပါ။ နိုင်ငံခြားသားမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ တစ်ချို့သော မြန်မာငါးခုံးမတွေလည်း ဒီလိုပါပဲ။ (ကိုယ်တိုင်လည်း ကြုံဖူးပါတယ်။ အဲ့လူ မျက်နှာကို ပိတ်ရိုက်ပစ်ချင်စိတ်ကို တော်တော်ထိန်းခဲ့ရပါတယ်။ အလုပ်ပြုတ်ရုံတင်မဟုတ်ဘဲ ရဲစခန်းပါရောက်မှာကိုး ... ) မြန်မာယောကျာင်္းတွေ၊ အားကိုးရှာနေတဲ့ မြန်မာမလေးတွေကို ဖျက်ဆီးနေကြတာလည်း မကြားချင်မှ အဆုံးပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နေတဲ့ အိမ်မှာဆို အဲ့ဒီ PR holder ကိုမြန်မာက တနင်္ဂနွေတိုင်း ခပ်တုံးတုံးပုံစံနဲ့ မြန်မာမလေးတွေကို တစ်လှည့်စီ ခေါ်လာတတ်ပါတယ်။ မိန်းမလည်း ရန်ကုန်မှာ ရှိပါတယ်။ အဲ့သူငယ်ချင်းအစ်မလည်း တစ်ရက်ကျ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို "ဟဲ့...ညည်းတို့က ဘာလဲဆိုတော့ ... ရည်းစားတဲ့....ညည်း စလုံးမှာ ဘာလုပ်နေလဲဖိုတော့ စက်ရုံမှာ WP တဲ့.... အဲဒါနဲ့.... အေး... အဲ့လူမှာ မိန်းမရှိတယ်။ အပတ်စဉ်လည်း မိန်းကလေးတွေ ခေါ်လာတတ်တယ်" ပြောပြီး အိမ်ပြောင်းတော့တာပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာက မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ချို့ အယုံလွယ်တာပါပဲ။ အားကိုးရှာလွယ် ကြတာပါပဲ။ သူများနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ စွန့်စားပြီးတောင် ထွက်လာကြပြီပဲ။ ဘာလို့ ဒီလို ဖြစ်နေစရာလိုလဲ? ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် တာဝန်ကျေအောင် လုပ်ပြီး ကိုယ့်ကို အကာအကွယ်ပေးမဲ့ ruleတွေ၊ ရပိုင်ခွင့်တွေ ဘာတွေရှိလဲလေ့လာပါ။ စလုံးက မိန်းကလေးတွေအတွက် တော်တော်လုံခြုံတဲ့နေရာပါ။ ဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ စိတ်ဓါတ်အဆင့်အတန်းနဲံ ယဥိကျေးမှုကို ဖယ်လိုက်ရင် နေလို့ကောင်းတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ (မမြင်ဘူး မူးဖြစ်ထင်နေမိသလားတော့ မသိပါဘူး။ )
မနိုင်းပြောတာ ပြန်ပြောကြပါစို့။ စာအုပ်အနီလေးကြောင့် အနှိမ်ခံရတယ်။ ထိုင်းလေဆိပ်က မယုံဘူး။ အနောက်နိုင်ငံတွေက အထင်သေးတယ်။ အနောက်နိုင်ငံသားတွေက ဥရောပသား မဟုတ်ရင် နှိမ်ကြတာပါပဲ။ မြန်မာဆို ပိုဆိုးမှာပေါ့။ ထားလိုက်ပါတော့။ ပြောချင်တာ ဒါ မဟုတ်ပါဘူး။ စာအုပ်အနီလေး အကြောင်းပြောချင်တာပါ။ အနှိမ်ခံရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။
အစိုးရကြောင့် ... ဒီကိစ္စထားလိုက်တော့။ ကျမတို့ အားလုံး ပူးပေါင်းကြရင်တောင် ပြုပြင်ဖို့ အရမ်းဝေးတဲ့ကိစ္စ.... (ကျမဝန်ခံပါတယ်... ကျမကြောက်တတ်တယ်... တစ်ကိုယ်ကောင်း ဆန်တယ်... ကျမ ဘဝကို အဲ့ဒီအတွက် မစတေးရဲဘူး.... ကိုယ်ကိုကိုယ် ချစ်တယ်... မိသားစုကို ချစ်တယ်.... ကျမလိုလူမျိုးတွေ များလို့ သူရဲကောင်းတွေ စတေးနေရတာ၊ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေး ဒီလို ဖြစ်နေတာ... DASSK ကို ကျမ အရမ်း လေးစားတယ်။ သူ့မှာရှိတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အားမာန်၊ မျိုးချစ်စိတ် ... ဒါတွေကို ကြက်သီးထတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီး ပီသတယ်။ ဒါပေမဲ့ .... ဒီနိုင်ငံကို နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့၊ တိုင်းပြည်အကျိုးကို တကယ်ကြည့်မဲ့ (စလုံးလို မလေးလက်အောက်ခံ၊ အနှိမ်ခံ တံငါရွာလေးကနေ ခုလိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့) နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဆိုရင် DASSKမှ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်သူကိုမဆို ထောက်ခံပါတယ်။ ကြိုဆိုပါတယ်။ အန်တီစုကလည်း သူ အုပ်ချုပ်မယ်တော့ မပြောပါဘူး။ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီရရင် လေဆိပ်ကို လမ်းလျှောက်ပြန်မယ် ပြောခဲ့တာပဲ.....) ဒါပေမဲ့ ....မနိုင်းကို comment ရေးသွားတဲ့ fan တစ်ယောက်ပြောသလိုပေါ့ ... "ကြံဖန်ပြီး အကောင်းမြင်ရမယ် ဆိုရင်တော့ မြောက်ကိုရီးယားလို နိုင်ငံထဲကနေ ပေးမထွက်ဘဲ ခိုးထွက်ရင်လည်း အကျဉ်းစခန်း ပို့မယ် ဆိုတာမျိုး လုပ်မထားတာပဲ ကျွန်တော်တို့မှာ ကံကောင်းနေသလိုလို။" .... ကျမတို့ကံကောင်းပါသေးတယ်။
Professional living work မှာ အရည်အချင်း မပြည့်ဝလို့.... ဒီကိစ္စကတော့ ကျမတို့ ပြုပြင်လို့ရပါတယ်။ အရည်အချင်း မပြည့်ဝဘူးလို့ပြောရင် မြန်မာပြည်ပညာရေးစနစ်က ပါလာပါတယ်။ (ဒါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး MZ မှာလည်း comment ဝင်ပေးဘူးပါတယ်။ ကိုယ့်ဘလော့မှာလည်း UCSYမှာ မောင်ငယ်၊ ညီမငယ်များသို့....ဆိုပြီး ရေးဖူးပါတယ်။ အပိုင်း(၁) ပဲရေးလို့ Choco ဆက်ရေးခိုင်းဖူးပါတယ်။ စာမေးပွဲပြီးရင်တော့ ပြန်ရေးပါ့မယ်။ :) ... ) ပြောချင်တာက စနစ်မကောင်းတာပါ။ လက်တွေ့ပိုင်းအားနည်းမှုများတာပါ။ သင်ရိုးတွေ ကောင်းပါတယ်။ Learning by heart, Studying to get the answer from the teachers အကျင့်တွေကို ဖျောက်ပစ်ပြီး Concept ပိုင်နိုင်အောင်ကြည့်တဲ့ Self Studyပုံစံ ပြောင်းလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ Theoryပဲသင်ပေးပြီး Solutionတွေ ရအောင် မရမချင်း ရှာခိုင်းတဲ့ ၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး အဖြေရှာတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ teacher ဒေါ်စံပယ်သိန်း၊ ဆရာ ဦးဇော်မင်းဦး၊ ဆရာ ဦးကျော်ကျော်စိုးနဲ့ ဆရာဦးထွန်းနိုင်တို့ကို ဒီနေရာကနေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက communication problemပါ။ တခြားနိုင်ငံက မြန်မာတွေတော့ မသိပါဘူး။ စလုံးမှာတော့ မြန်မာတော်တော်များများ အင်္ဂလိပ်စာ ညံ့တယ်ထင်ပါတယ်။ (အားလုံးကို မဆိုလိုပါ။) ကိုယ်က ဘယ်လောက်ပဲ အရည်အချင်းရှိရှိ သူ့ကို စကား မပေါက်ရင် အလကားပါပဲ။ ဒီတော့ မြန်မာတွေ အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်အောင် ကြိုးစားပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ နောက်ကျတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒီပို့စ်ကိုရေးနေတဲ့ ကျမကိုယ်တိုင်လည်း အင်္ဂလိပ်စာ ညံ့ပါသေးတယ်။ ကြိုးစားနေဆဲပါ။ ခုထိလည်း ငါးပိ အင်္ဂလိပ်နဲ့ ထစ်ငေါ့... ထစ်ငေါ့ ... ပြောနေတုန်းပါ။ ဒီတော့ အတူတကွ ကြိုးစားကြရအောင်လေ....
နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ မြန်မာတွေ မညံ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကြိုးစားကြပါ။ မြန်မာဟာ (နိုင်ငံသားပြောင်းခဲ့ရင်တောင်) မြန်မာပါပဲ။ (စာအုပ် အရောင် မပြောင်းခဲ့တဲ့ မနိုင်းကိုလည်း လေးစားပါတယ်)။
မြန်မာဖြစ်ရတာ ရှက်စရာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာတွေ တော်တယ်၊ အရည်အချင်းရှိတယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံတကာအလယ်မှာ မော်ကြွားနိုင်အောင် အတူတကွ ကြိုးစားကြပါစို့လား သူငယ်ချင်းတို့ရေ...
မချော ( အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) ပြောသလို "တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်တော့ ကိုယ့်နိုင်ငံနံမည်ကြားလိုက်ယုံနဲ့ အထင်ကြီးတဲ့ လေးစားတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ ပြန်အကြည့်ခံရမဲ့အချိန် ရှိလာဦးမယ်လို့ မျှော်လင့်ချင်ပါတယ်..." ပြောရင်း ဒီ ပို့စ်လေးကို နိဂုံးချုပ်ပါရစေ...။ ။
WITCH83 To Continue Reading
Posted by witch83 at 6:28 PM2comments:
မှတ်သားမိတဲ့ Quotes တစ်ချို့(၄)
မှတ်သားမိတဲ့ Quotes တစ်ချို့  အပိုင်း(၄)ကို ဆက်ရေးပါ့မယ်။ Quotesကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆိုရိုးစကားဆိုပြီး ဘာသာပြန်ထားတာ ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လား မသိပါဘူး။ မဟုတ်ရင်လည်း ပြင်ပေးကြပါဦး။း)
အပိုင်း(၃)အတွက် ပထမဆုံးရွေးထားတဲ့ ဆိုရိုးစကားကတော့ "သူဟာ ကိုယ် မဟုတ်ဘူး"တဲ့။
ဘုန်းဘုန်း အရှင်ဆေကိန္ဒဟောကြားခဲ့တဲ့စကားလေးပါ။ သိပ်ကိုမှန်တဲ့ စကားလေးပါပဲ။ သူဟာ ကိုယ်မဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေက တစ်ခုခုဆိုရင် "ငါသာဆိုရင် အဲ့လို မလုပ်ဘူး။ ............ လို လုပ်မှာ"ဆိုပြီး သူများကို အပြစ်တင် ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခက်တာက၊ အဲ့ဒီလူတွေ မေ့နေတာက .... သူက ကိုယ်မဟုတ်ဘူးလေ။ ဘယ်လိုလုပ် ကိုယ်လုပ်သလို သူက လိုက်လုပ်မှာလဲ။ အဲဒီ သူကလည်း ကိုယ်ဖြစ်လို့ မရဘူးလေ။ ဖြစ်ရင် ရှုပ်ကုန်မှာပေါ့။
အဲဒီတော့ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျတွေ ဖြစ်မလာတဲ့အခါ.... သူများကို အားမလိုအားမရဖြစ်တဲ့အခါ.... စိတ်ဆိုးတဲ့အခါ ... နှလုံးသွင်းရမှာက... အေးလေ။ သူက ကိုယ်မှမဟုတ်တာပဲ။ ဘယ်လိုလုပ် ကိုယ်ဖြစ်စေချင်သလို ဖြစ်မှာလဲ၊ ကိုယ်လုပ်သလို လိုက်လုပ်မှာလဲဆိုပြီး စိတ်ဖြေလိုက်တာကမှ မှန်ကန်တယ်၊ တရားနည်းလမ်းကျတယ် ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကိုလည်း ငြိမ်းချမ်းစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယမြောက် quoteလေးကတော့ "မိမိကိုယ်ကို အပြည့်အဝ လက်ခံလိုက်ပါ" တဲ့။
အရမ်းကို မှန်တဲ့စကားတစ်ခွန်းပါပဲ။ အဲ့ဒီ "Accept who you are completely"ဆိုတဲ့စကားဟာ တကယ့်ကို မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု၊ တန်ဖိုးထားမှု၊ ဘဝအောင်မြင်မှုအတွက် သိပ်ကို အရေးပါတဲ့ စကား ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်၊ ကောင်းတဲ့အကျင့်၊ ဆိုးတဲ့ အကျင့်တွေကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်သုံးသပ်သင့်ပြီး အဲ့ဒီ အချက်တွေအားလုံးကို (မိမိကိုယ်ကို မလိမ်ဘဲ) အပြည့်အဝ လက်ခံသင့်ပါတယ်။ အဲ့လို လက်ခံလိုက်မှလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သေချာမြင်နိုင်ပြီး အားနည်းချက်တွေကို ပြုပြင်၊ အားသာချက်တွေကို အသုံးချ၊ ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကို ဆက်ထိန်း၊ ဆိုးတဲ့အကျင့်တွေကိုဖျောက်နိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပိုတန်ဖိုးထားနိုင်တဲ့၊ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကို ရနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ကျမကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်၁၀၀% လက်ခံနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။း)
နောက်... တတိယမြောက် quote ကတော့ "ရှိတာနဲ့ ရောင့်ရဲနိုင်ပါစေ"တဲ့။
ကျမတို့တော်တော်များများ မှားယွင်းစွာ ယုံကြည်လက်ခံနေကြတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ "ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ကိုယ့်မှာမရှိတာကို ရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာ"လို့ ထင်နေကြတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်က ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အရာကို သိရှိလက်ခံနိုင်တာပါပဲ။ မိမိကိုယ်ကို ရောင့်ရဲနိုင်မှသာ ဒီလောကကြီးမှာ နေပျော်မှာပါ။ ပျော်ရွှင်မှုကို ဖန်တီးနိုင်မှာပါ။ ရောင့်ရဲခြင်းက ဘုရားတရားတော်နဲ့လည်း ညီပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရောင့်ရဲပြီး ပျော်ရွှင်ကြပါစို့လား သူငယ်ချင်းတို့ရေ....
ကဲ.... သုံးခုလည်း ရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ ဒီပို့(စ်)ကို ဒီမှာ ရပ်ပါမယ်။ နောက် အပိုင်းတွေလည်း လာပါဦးမယ်။
စာကြွင်းအနေနဲ့ကတော့ ဒီ မှတ်သားမိတဲ့ Quotes တစ်ချို့ပို့(စ်)တွေက ကျမကိုယ်ကျမ ကျမရဲ့စိတ်ကို ဆုံးမဖို့လိုလာတဲ့အခါ ကိုယ်ဖတ်ဖူး၊ ကြားဖူးတဲ့ စကားတွေကို နှလုံးသွင်းတဲ့ quote တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖတ်ရတာ quoteတွေက အဆီငေါ်တည့်ချင်မှ တည့်ပါလိမ့်မယ်။ အမှားလေးများပါရင် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့။
Posted by witch83 at 8:21 PM 1 comment:
လင်မယားနှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အလွန် စိတ်တိုနေကြသည်။
ယောင်္ကျားဖြစ်သူသည် အလုပ်မှ အိမ်သို့ နေ့စဉ် နေ့လည်စာပြန်စားလေ့ ရှိသည်။
နေ့လည်ခင်းသို့ ရောက်သောအခါ ယောင်္ကျားဖြစ်သူက အလုပ်မှနေ၍ မိန်းမဖြစ်သူဆီကို ဖုန်းဆက်ကာ မေးသည်။
ယောင်္ကျား ။ ။ "ဒီနေ့ ဘာ ဟင်းလဲဟေ့".....
မိန်းမ ။ ။ "အဆိပ်"
ယောင်္ကျား ။ ။ "အေး... ကောင်းတယ်။ မင်း ငါ့ကို ထမင်းစား စောင့်မနေနဲ့တော့။ အရင်စားထားနှင့်လိုက်" .....
Internet မှ ဟာသကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ပါသည်။ ။
Posted by witch83 at 11:57 AM No comments:
Labels: ဘာသာပြန်, ဟာသ
ချစ်ဖွယ့် လူသား။ ။
ငယ်ငယ်လေးတုန်းက သင်ခဲ့ရတဲ့ ကဗျာလေးပါ။ To Continue Reading
Posted by witch83 at 12:15 PM No comments:
Labels: My Collection, Share, ကဗျာ
Posted by witch83 at 7:55 PM No comments:
Posted by witch83 at 10:44 AM 1 comment:
Original Post အတိုင်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အကြော်တွေ ကြွပ်ရွဖို့အတွက် ရေသန့်ဗူးတွေ ထည့်ကြော်ပါတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းလေး မော်ဒန်ဂျာနယ်မှာ ပါလာတယ်။ အဲဒီဟာတွေ မစင်နဲ့ ရီတာက မေးလ်ကနေ ပို့ပေးလို့ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဘာရယ်ညာရယ် မဟုတ်... ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ဖတ်စေချင်လို့ စာတွေကို ဆက်ဖြန့်ပေးလိုက်သေးတယ်။ အယုံလွယ်သူ မဟုတ်ပေမယ့် ဖျတ်ခနဲ ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင် သေချာ မစဉ်းစား မဆင်ခြင်မိလိုက်ဘူး။ နောက်တနေ့မှာ ဖိုရမ်ဖတ်ဖြစ်တော့ ကယ်လ်ဗင်က အဲဒီအကြောင်းကို သေသေချာချာ ရှင်းပြထားတာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ သူ ရှင်းပြလိုက်တော့လည်း သြော်... ဒါလည်း ဟုတ်တာပဲ... ပေါ့။ ငါလည်း ချီးဘရိန်းပါလား ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။
ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရေးထားတဲ့ ဂရုဏာဒေါသတွေ ပါနေပေမယ့် စာရေးသူရဲ့ အရိုးခံစေတနာကို နားလည်မိတဲ့ ကျွန်တော်အတွက်... ကယ်လ်ဗင် ရေးထားတာလေးကို ကျွန်တော့်ဘလော့မှာ ထပ်ဆင့် ဝေမျှလိုက်ပါရစေ...
Posted by JulyDream
Posted by witch83 at 10:39 AM No comments:
Source; Internet To Continue Reading
Posted by witch83 at 12:08 PM 1 comment:
နောက်မှတ်ထား မမရဲ့ အဝတ်အစားတွေကိုယူမဆော့နဲ့....... To Continue Reading
Posted by witch83 at 9:01 PM No comments:
" အသိညဏ်ပိုင်းမှာ ကျွန် မခံတဲ့သူ ".....by ဆရာတော် ဦးဇောတိက
အသိညဏ်ပိုင်းမှာ ကျွန်,မခံတဲ့သူ & လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်
ကိုယ့်ရဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လေ့လာခွင့် စူးစမ်းခွင့် ၊ ကိုယ့်ရဲ့ တွေးခေါ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည် ( intellectual rights and powers ) ကို လုံးဝ အထိမခံပဲ စောင့်ရှောက်တဲ့သူမှာပဲ လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဓာတ် ရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်တယ် ။ အသိညဏ်ပိုင်းမှာ ကျွန်မခံတဲ့သူ၊ အမွေခံလာတဲ့ အယူအဆ တွေကို ကျေနပ်မနေတဲ့သူ၊ အမှန်တရားဆိုတဲ့ အလင်းရောင်ကို ဘက်မလိုက်ပဲ ရင်ဖွင့်ကြိုဆိုတဲ့သူ၊ မနက်စောစော နေထွက်လာတာကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုသလို မှန်ကန်တဲ့ အသိသစ် အမြင်သစ်တွေကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုတဲ့သူမှသာ လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဓာတ် ရှိတယ် ကိုယ့်ညဏ်နဲ့ကိုယ် နားလည်တဲ့ အယူအဆကိုပဲ လက်ခံမယ် ။ ကိုယ်နားမလည်နိုင်တာတွေကို နားမလည်ပေမဲ့ လက်ခံရမယ်လို့ ပြောတာကိုတော့ လုံးဝလက်မခံဘူး ။ အယူအဆတခုကို လက်ခံတာ လက်မခံတာဟာ ကိုယ့်အခွင့်အရေးပဲ ။ ကိုယ် မချစ်နိုင်တဲ့သူကိုချစ်ရမယ်လို့ အတင်းအကျပ် ခိုင်းလို့မရသလိုပဲ ကိုယ် မယုံတာကို ယုံရမယ်လို့ အတင်းအကျပ် ခိုင်းလို့မရပါဘူး ။ သူများနဲ့မတူတဲ့ အယူအဆ ကိုလဲ ကိုယ်ကြိုက်ရင်လက်ခံမယ်။ ကိုယ့်အယူအဆကို အများမကြိုက်လည်း ကိုယ့်အယူအဆကို ကိုယ် လက်ခံတာဟာ ကိုယ့်အခွင့်အရေးပဲ ။ အဲဒါ ဘယ်သူမှ ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး ။ ဒါဟာကိုယ့်ရဲ့ ........intellectual rights........ပဲ ။ ကိုယ့်ရဲ့ intellectual powers (စဉ်းစားနိုင် ၊ တွေးခေါ်နိုင်၊ ဝေဖန်စမ်းစစ်နိုင် ၊ စူးစမ်းရှာဖွေနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိ)ကိုလည်း အထိမခံဘူး ။ "စဉ်းစားနေစရာ မလိုဘူး မင်းကဘယ်လောက်ညဏ်ရှိလို့လဲ ".... ဆိုတဲ့ အပြောမျိုးကို လုံးဝ လက်မခံဘူး ။ ကိုယ့်မှာရှိသလောက်ညဏ်နဲ့စဉ်းစားရမှာ ကိုယ့်အခွင့်အရေး နဲ့ ကိုယ့်တာဝန်ပဲ ။ ဒီအခွင့်အရေးကိုလည်း လက်လွတ် ဆုံးရှုံး မခံနိုင်ဘူး ။ ဒီတာဝန်ကိုလဲ ဘယ်သူ့ကိုမှ မလွှဲနိုင်ဘူး။
ဒီတာဝန်ကို သူများကိုလွှဲလိုက်ရင် ကိုယ့်ဘဝကို သူများလက်ထဲ လွှဲလိုက်တာနဲ့ အတူတူပဲ။
ဒီတာဝန်ကို သူများကိုလွှဲလိုက်တာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ လွတ်လပ်မှုကိုပါ သူများလက်မှာ အပ်နှံထားလိုက်တာနဲ့ အတူတူပဲ။
ယုံခိုင်းတာကို ယုံတာဟာ အသိညဏ်ပိုင်းမှာ ကျွန်ခံလိုက်တာပဲ ။
မှားသလား? မှန်သလား? ဆိုတာကို မေးခွင့်တောင်မပေးပဲ ယုံခိုင်းတာတွေကို ယုံနေကြလို့၊ အယူသည်းမှုတွေကို ယုံနေကြလို့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ အကြောင်းအကျိုးကိုက်အောင် ဆွေးနွေးတဲ့နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းလို့မရတော့ဘူး။ " ငါတို့အယူအဆပဲ မှန်တယ် သူတို့အယူအဆမှားတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုး၊ သဘောထားမျိုးကြောင့် ကမ္ဘာကြီးမှာကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေကို အဖြေရှာလို့မရဘူး ။ ငါတို့နဲ့အယူအဆ မတူတဲ့သူဟာ ငါတို့ရန်သူပဲလို့ သဘောထားနေကြလို့ ဆွေးနွေးလို့မရဘူး ။ အဖြေရှာလို့မရဘူး ။
လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဓာတ် မရှိသူတွေကြောင့် ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းရ ခက်နေတာပါ ။ လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဓာတ် ရှိကြရင် အစကတည်းက တော်တော်များများ ပြဿနာတွေဟာ ဖြစ်လာမှာတောင်မဟုတ်ဘူး ။ ဘာသာရေး အယူအဆ မတူလို့ ပြဿနာတွေဖြစ်ကြတယ်။ နိုင်ငံရေး အယူအဆ မတူလို့ ပြဿနာတွေဖြစ်ကြတယ်။ ဘာသာရေး နဲ့ နိုင်ငံရေး တွဲလိုက်ရင် ပိုဆိုးတယ် ။ ဘာသာရေးစစ်ပွဲတွေ ဖြစ်တယ် ။ နိုင်ငံရေး စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်တယ် ။ ဘယ်သူမှန်သလဲ ။ ဘယ်သူမှ မမှန်ဘူး ဆိုတဲ့ အဖြေပဲထွက်တယ် ။ အားလုံးဟာ အယူသည်းမှုတွေမှာ အခြေခံပြီး သဘောထားကွဲလွဲတာပဲ ။ အဲဒီ အယူသည်းမှုတွေကိုသာ " ဒီ အယူသည်းမှုတွေဟာ မမှန်ဘူး ၊ အကျိုးမရှိဘူး "ဆိုပြီး မစွဲလန်းတော့ရင် ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းရတာ လွယ်သွားမယ်။ ရှေးတုန်းက လူတွေဟာ သဘာဝတရားအကြောင်းကို သူတို့ လက်လှမ်းမှီသလောက် တွေးခေါ်ပြီး စဉ်းစားပြီး အဖြေရှာခဲ့တယ် ။ သူတို့ လက်လှမ်းမှီသလောက် တွေးခေါ်ပြီး စဉ်းစားပြီး အဖြေရှာခဲ့တယ် ။ သူတို့ခေတ်က စာပေအရေးအသားလည်း မထွန်းကားသေးလို့ တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့်ကြား နည်းနဲ့ လက်ဆင့်ကမ်းလာကြရတယ် ။ ဘာသာရေးမှာလဲ အဓိက အချက်က အမှန်တရားနှင့် လွတ်လပ်မှုကိုရှာတာဘဲ။ စိတ်ဆင်းရဲမှုရဲ့ အကြောင်းမှန်ကိုရှာတာ ။ စိတ်ဆင်းရဲမှုနည်းအောင်နေနည်းကို လေ့လာတာ။ စိတ်ထားကောင်းဖို့၊ စိတိထား သန့်ရှင်းအောင်လုပ်နည်းကို လေ့လာတာ။ ဒါကြောင့်.... မျက်ကန်းယုံကြည်မှု မဖြစ်ရဘူး။ ယုံကြည်မှုက အဓိကလို့ပြောလာရင် ကိုယ့်လွတ်လပ်မှု့ကို သူလက်ထဲရောက်အောင်လုပ်ပြီး သူ့ကိုယ့်ကျိုးရအောင် လုပ်တော့မယ်ဆိုတာ သေချာတယ်။
နိုင်ငံရေးမှာလဲ အမှန်တရားနဲ့ လွတ်လပ်မှုဟာ အဓိကဖြစ်တယ်..... ဘယ်လိုဥပဒေမျိုးလဲ အုပ်ချုပ်ရင် လူများစု စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေမလဲ ဆိုတာကို လေ့လာတာ ။ စိတ်ချမ်းသာမှု ရှိဖို့ အဆင်ပြေဖို့ဆိုတာ လွတ်လပ်မှုရှိမှ ဖြစ်မယ် ။ ဒါကြောင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်နိုင်အောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောနိုင်အောင်၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်အောင် ဘယ်လို အစီအစဉ်နဲ့ လုပ်ရင်ရမလဲ ဆိုတာကို လေ့လာတာ ။ တစ်ဦးရဲ့ လွတ်လပ်မှုဟာ နောက်တစ်ဦးရဲ့ လွတ်လပ်မှုကို မဖျက်ဆီးအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ။ မမျှတမှုတွေ .... မတရားမှုတွေ .......မရိုးသားမှုတွေ ... လိမ်ညာမှုတွေ မရှိအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ...အဲဒါတွေကိုလေ့လာတာ နိုင်ငံရေး ..... ဒီနေရာမှာလဲ အဓိက အချက်က အမှန်တရားနဲ့ လွတ်လပ်မှုဘဲ ဖြစ်တယ် လှည့်စားမှုတွေဟာ နိုင်ငံရေး အစစ် မဟုတ်ဘူး လှည့်စားတာဟာ ....ကိုယ့်လွတ်လပ်မှုကို သူ့လက်ထဲရောက်အောင်လုပ်ပြီး ...သူ့ကိုယ့်ကျိုးကို ရှာဖို့ လုပ်တာ ... တဘက်သတ် သဘောထားကို... ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုတ်ကိုင် ထားတာဟာ ကိုယ်ကျိုးကို အဓိကထားလို့ဘဲ ။ အမှန်တရားနဲ့ တရားမျှတမှုကို တကယ် မလိုလားလို့ဘဲ အမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုကိုတကယ်လိုလားတဲ့သူဟာ တဘက်သက် သဘောထားကို လက်မခံဘူး ။ လက်ကိုင်မထားဘူး ။ သဘောထားမတူတာ အမြင်မတူတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး အမျှတဆုံးအဖြေ . ... အကောင်းဆုံးအဖြေကို.... မရမချင်းရှာနေမယ် .... သဘောထား မတူတဲ့သူတွေရှိနေမှ ပိုပြီးထောင့်စေ့အောင် သဘောထား မတူတဲ့သူတွေရှိနေမှ ပိုပြီးထောင့်စေ့အောင်စဉ်းစားနိုင်မယ် ။ ဒါမှ အကောင်းဆုံးအဖြေကိုရမယ် ။ အားလုံးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာ... အားလုံးလက်တွဲပြီးလုပ်မှ ရတယ် ။ လက်မတွဲရင် အင်အားတွေကို စုစည်းလို့ မရဘူး ။ မြင်းလေးကောင်တပ်ထားတဲ့ ရထားဟာ.... မြင်းတွေက ဆွဲတာ မညီရင် ခရီးမတွင်ဘူး ။ ဘယ်ဘက်မြင်း ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲပြီး ညာဘက်မြင်းက ညာဘက်ကိုဆွဲနေမယ် ။ အလယ်က မြင်းနှစ်ကောင်က မဆွဲဘဲနေမယ်ဆိုရင် ခရီးမရောက်နိုင်ဘူး ............ အားလုံးက လွတ်လပ်မှုနဲ့ အမှန်တရားကို ............လိုလားရင် ညီညွတ်မယ် ။ အသိအမြင်တွေ တိုးလာတဲ့ အခါမှာ အရင်တုန်းက သိထားတာတွေမှာ.... လွဲနေတာ မပြည့်စုံတာတွေကို မှန်အောင်ပြည့်စုံအောင် ပြင်ရမှာဘဲ...... ငါတို့သိထားတာဟာ နည်းနည်းမှ မလွဲဘူး ။ ပြည့်စုံတယ် ။ ပြင်ဖို့မလိုဘူးလို့ မျက်စိမှိတ်ပြီးပြောနေတဲ့သူဟာ အမှန်တရားကို တန်ဖိုးမထားတဲ့သူ...... လွတ်လပ်မှုကို တန်ဖိုးမထားတဲ့သူ၊ လွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့သူဖြစ်တယ် .... အဲဒီလိုလူတွေဟာ သူတစ်ပါးကိုလဲ လွတ်လပ်မှုမရှိအောင်လုပ်တယ် အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ် ။ လွတ်လပ်မှုနဲ့ အမှန်တရားဟာ စိတ်ကိုအားရှိစေတယ် သတ္တိရှိစေတယ် ။ စိတ်မှာ တကယ် အားရှိချင်ရင် ၊ သတ္တိရှိချင်ရင် ၊ လွတ်လပ်မှုနဲ့ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးတဲ့ စိတ် ၊ လွတ်လပ်မှုနဲ့ အမှန်တရားကို ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်တဲ့ စိတ်ရှိရမယ်ူ လူတွေကို ကြည့်တဲ့ အခါ လူတွေနဲ့ စကားပြောကြည့်တဲ့ အခါ သူတို့မှာ အားမရှိဘူး ဆိုတာတွေ့ရတယ် ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ။ သူတို့စိတ်မှာ လွတ်လပ်မှု မရှိဘူး ။ သတ္တိရှိတဲ့သူအားရှိတဲ့သူကို စကားပြောတဲ့အခါ....... လေ့လာကြည့်ပါ သူ့ရင်ထဲမှာ လွတ်လပ်မှုနဲ့ အမှန်တရားရှိနေတယ် ။ လူအများစုက.... လွတ်လပ်မှုနဲ့ အမှန်တရားကို တကယ်မြတ်နိုးလာရင..် မှားယွင်းနေတဲ့ အယူအဆတွေ ပျောက်သွားမယ် ....... ဒါမှ လူ့လောကကြီးဟာ ပိုပြီး အဆင်ပြေလာမယ်။ ဒါကြောင့်လောကကြီး အဆင်ပြေဖို့ဆိုတာ လူတွေ ငွေကြေး ချမ်းသာယုံနဲ့မရဘူး ။ လူတွေရဲ့ရင်ထဲ နှလုံးသားထဲမှာ လွတ်လပ်မှုနဲ့အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးတဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်။ လွတ်လပ်မှုနဲ့ အမှန်တရားဟာ အင်မတန်အရသာရှိပါတယ် ။ စိတ်ကိုပေါ့ပါးစေတယ် ။ ရွှင်လန်းစေတယ် ။ ဒီအရသာကို လူတွေများများ ခံစားတတ်အောင် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်ပေးရမယ်........ ဒါကိုမိဘတွေက အရင်ဆုံး ..လုပ်ပေးဖို့လိုတယ် ။ နောက်တော့ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမတွေက လုပ်ပေးဖို့လိုတယ် ... ဒီလိုလုပ်ပေးတာဟာ လောကကြီးရဲ့ အကျိုးကို အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ လုပ်တာဘဲ ။ ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်လဲ အဲဒါကိုဘဲ ဦးစားပေးပြီးလုပ်ပါတယ် ။ ကိုယ်တိုင်လဲ .. လွတ်လပ်မှုနဲ့ အမှန်တရားကို တန်ဖိုးထားတဲ့ စိတ်နဲ့နေမယ် ။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကိုလဲ လွတ်လပ်မှုနဲ့ အမှန်တရားကို တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုချစ်တတ်အောင် .... ပိုခံစားတတ်အောင် ပြောနေမယ် ............. ဆွေးနွေးနေမယ် ...... ဒီလိုပြောတော့ ကိုယ်မချစ်တဲ့သူတွေကိုတော့ မပြောဘူးလို့ အဓိပ္ပါယ်ပေါက်သွားတယ် ။ ဒီလိုတော့ မဆိုလိုပါဘူး......... အားလုံးကိုပြောချင်လို့ ဒီစာကိုရေးနေတာပါ ........
Posted by witch83 at 10:43 AM No comments:
၁ + ၁ =၂
တစ်နဲ့တစ်ပေါင်းရင် နှစ်ရတာဟုတ်ပေမဲ့ ရေတစ်စက်နဲ့ ရေတစ်စက်ပေါင်းတဲ့ အခါမှာတော့ နှစ်စက်မရဘူး။ ရေတစ်စက်ပဲရတယ်နော်။ ဒါပေမဲ့ ရေစက်လေးတော့ ပိုကြီးသွားတယ်။ ဒါကြောင့် တွေ့ဖို့ရှိကြတဲ့ ရေစက်လေးတွေကို အတူတူပေါင်းစပ်ပြီး ရေစက်တွေ မခြောက်ခမ်းခင် တန်ဖိုးထားကြပါစို့လား သူငယ်ချင်းတို့ရေ။ ။﻿﻿ To Continue Reading
Posted by witch83 at 12:28 AM No comments:
Relationship (DID I MARRY THE RIGHT PERSON?)
People in love sometimes say, 'I was swept off my feet.' Think about the imagery of that expression.
At this point, you and/or your spouse might start asking, 'Did I marry the right person?' And as you and your spouse reflect on the euphoria of the love you once had, you may begin to desire that experience with someone else. This is when marriages breakdown.
SUSTAINING love is notapassive or spontaneous experience. It'll NEVER just happen to you. You can't 'find' LASTING love. You have to 'make' it day in and day out. That's why we have the __expression 'the labor of love.'
"God determines who walks into your life.It is up to you to decide who you let to walk away,who you let to stay, and who you refuse to let go."
Relationshp is about making the person the right person, for no one come as the right person...
project အတွက် ebook တွေ လျှောက်ရှာရင်း တွေ့ခဲ့တဲ့ pdf file လေးပါ။ author name လည်း မပါပါဘူး။ ကြိုက်လို့ လိုက်မယ်ထင်တဲ့ပုံတွေ ရှာပြီး ပြန် share လိုက်တာပါ။ Triangle ပုံကတော့ ကိုယ့်ဘာသာလုပ်ထားတာပါ။ ။ To Continue Reading
Posted by witch83 at 12:00 PM 1 comment:
Labels: My Collection, Share, အချစ်
Meaning of0to 9
အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ0to9မှာ meaningကိုယ်စီ ရှိကြတယ်ဆိုတာ.....
roman ဂဏန်းအက္ခရာ I, II, III, IV, .... နဲ့ခွဲခြားဖို့ arabic alogrithm ကို တည်ဆောက်ပြီး 1,2,3,4,.... ဖြစ်လာတယ်ပြောတာပဲ....
အောက်က ပုံတွေကို ကြည့်လိုက်နော်... အရမ်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်..... angle လေးတွေနဲ့ ခွဲ .... ခွဲသွားတာ....း)
Source ; http://groups.yahoo.com/group/new_fun_and_fun_only
Posted by witch83 at 12:45 PM No comments:
ကံကောင်းချင်တော့ G2000က style pantကို ၁၉ကျပ်နဲ့ ရခဲ့တယ်။ ကံမကောင်းချင်တော့ အိတ်ကပ်က အပိတ်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။
ကံကောင်းချင်တော့ ဖုန်းအိတ်လေးက ဘောင်းဘီမှာ ချိတ်လို့အဆင်ပြေတယ်။
အဲ့နေ့က ..... ကံမကောင်းချင်တော့ လွယ်အိတ်ထဲမှာကျန်ခဲ့တဲ့ဖုန်းကို တကူးတက ပြန်သွားယူတယ်။
ကံမကောင်းချင်တော့ ဖုန်းအိတ်လေးကို လက်မှာချိတ်မိတယ်။ handset လေး ပျောက်သွားတယ်။
ကံကောင်းချင်တော့ အဲ့နေ့ကျမှ ဖုန်းအိတ်ထဲမှာ ထည့်နေကျ cardပေါင်းစုံ မထည့်မိဘူး။
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ထဲရှိရာ လျှောက်ရေးမိတာပါ။ blog လေးကို ဖုန်ခါတာ.... :) To Continue Reading
Posted by witch83 at 2:20 PM3comments:
Labels: Dedicated Words, My Diary, ရေးမိသမျှ, ရောက်မိရောက်ရာ